I-China LVT Flooring Production Line (Online Lamination) Ukukhiqiza nefektri | Jiahao
Iphansi le-LVT lucwaningo lwekhwalithi ephezulu, oluphuma ezintweni ezintsha zomhlabathi, kusetshenziswa i-PVC elicwengekile ne-powder yamatshe ukwakha isisekelo esiqinile samandla amakhulu, embozwe ngamaphethini angempela wesendlalelo sokuphrinta, ingaphezulu elinokugqoka okuqinile ikhava engqimba yesembozo se-PVC esobala, phansi ne-anti slip film, icutshungulwa ngenqubo ethile, ngaphezu kwesendlalelo sangemuva ngemuva kokumbozwa kwe-UV, ukwelashwa kwe-aluminium oxide enamathela ukwelashwa kwe-bactericidal, ukuze umkhiqizo ube nemigqa ecacile nenhle, ukunwebeka, ukuhamba ngokunethezeka nokusebenza kokumunca umsindo, ukumelana nokugqoka okuphezulu, ukuhlanza kalula, ukugcinwa okuphansi, ukwakhiwa okusheshayo nokulula nezinye izinzuzo.
Izinzuzo ze-LVT floor extrusion line ekukhiqizeni i-LVT floor
1. Izinsizakusebenza eziyinhloko ezisetshenzisiwe ku-LVT floor yipulasitiki ye-polyethylene futhi kukhethwe impuphu yamatshe engasebenzi ngemisebe. I-PVC iyinsiza evuselelwa imvelo futhi engeyona enobuthi. Isetshenziswe kabanzi empilweni yabantu yansuku zonke, njenge-tableware, izikhwama ze-infusion yezokwelapha, njll kunqubo yokukhiqiza, izithako ezifakiwe azinabuthi ngokuphelele futhi azinemisebe. Ngakho-ke i-LVT floor iyisitezi esivamile sokuvikela imvelo.
2. Isitezi se-LVT esenziwe kabusha ngokwemvelo singesinye sezinto ezimbalwa zomhlabathi ezingasetshenziswa kabusha futhi zisetshenziswe kabusha. Ikakhulu, i-glue yamahhala ye-LVT floor ingavuselelwa kabusha ngokuphelele eminyakeni embalwa. Kubaluleke kakhulu ukuqhubeka nokukhiqiza i-LVT substrate yokuvikela izinsiza zomhlaba kanye nemvelo.
3. I-ultra light ne-ultra-thin LVT floor ingu-4-5mm kuphela ubukhulu futhi inesisindo esingu-8-11kg kuphela ngemitha eyisikwele, okungaphansi kuka-20% wezinto ezejwayelekile zetshe. Inezinzuzo ezingenakuqhathaniswa ezakhiweni eziphakeme zokwakha ukuthwala umthwalo nokonga isikhala.
4. Ubuso besitezi se-LVT esimelana nokugqoka futhi bungaqedi bunengqimba ekhethekile esobala yokulwa nemithi esetshenzwe ubuchwepheshe obuphezulu. Ngaphezu kwalokho, ingaphezulu limbozwe ngogqinsi lokumelana nokugqokwa, futhi inamba yaso yokuvikela ukumelana nokugqoka ingafinyelela ku-20000. Ngenxa yokumelana nokugqokwa okukhulu, iphansi le-LVT lithandwa kakhulu ezindaweni eziminyene, enxanxatheleni yezitolo nasezitolo ezinkulu.
Umugqa wokukhiqizwa kwe-LVT floor uxazulula izinkinga zokubanda kokhonkolo obandayo, onzima, ompunga, omanzi futhi onomsindo Lo mkhiqizo wenziwe ngepulasitiki engabasi futhi akulula ukubangela umlilo. Ngaphezu kwalokho, izinto eziyisisekelo zalolu chungechunge lwemikhiqizo eziyisi-6 ziqiniswe amacansi e-fiber fiber nge-shrinkage engaphansi kwenkulungwane, futhi ungqimba olungagqoki ebusweni luhlelwe ngokukhethekile. Ngakho-ke, ukusebenza kwayo kwe-stretch, ukusebenza kwe-anti curling, ukusebenza kwe-anti shrinkage, ukusebenza okungangeni manzi nokulwa nesikhutha, ukugqoka ukumelana, njll. Kuqhathaniswa namaphansi ashibhile akhona anezindwangu ezingezona ezelukiwe, iphepha noma amapulasitiki asetshenziswe kabusha njengezinto eziyisisekelo nokungavumi ukumelana phezulu, Ikhwalithi nokusebenza kungcono kakhulu. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yeJiahao ibikhona ezweni lonke, futhi yathunyelwa eRussia, eSpain, eTurkey, eSouth Korea, e-Indonesia, eNdiya, eJapane, eJalimane, eNingizimu Melika nakwamanye amazwe nezifunda, yamukelwa kahle ngamakhasimende. UJiahao unethimba elivuthiwe elihlanganisa abaphathi, i-R & D, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthumela kanye nokusebenza, okunganikeza ngezinsizakalo ezisebenza kahle kakhulu nezisezingeni eliphezulu kuyo yonke inqubo yocwaningo lokuqala, ukuboniswa kwesikimu, ukuklanywa kwesikimu, ukuthunyelwa kwemishini nokwamukelwa , ukuqeqeshwa kokusebenza kwemishini, njll.
Langaphambilini Umugqa Webhodi Lefenisha Yekhabinethi WPC
Spc zaphansi Production Line
Spc zaphansi Production Machine